ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ချောကလက် စကျွေးမလဲ။ - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေးတွေအတွက် အသက် ၆လ အထိ မေမေ့နို့စို့တယ်။ ၆ လပြည့်ရင် မေမေ့နို့အပြင် ဘေဘီလေးက အစား စစားပြီ။ အစာစစားတယ် ဆိုပေမယ့် အစားအစားတိုင်းကို မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်း ခပ်ပျော့ပျော့၊ နူးအိအောင် ပြုတ်ထားတဲ့ အသား၊ မုန်လာဥနီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတို့ကို နူးအောင်ပြုတ် ကြိတ်ခြေလို့ ကျွေးရတာပါ။
ကလေးကို ၆ လ မပြည့်ခင်မှာ အစာမာ မကျွေးသင့်သလို ရေလည်း မတိုက်သင့်သေးပါဘူး။ ကလေးကို အရွယ်မတိုင်ခင်မှာ အစာမာ ကျွေးတာက မလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ ကလေးကို ၆ လမှာ အစာမာ စကျွေးလို့ရပြီ ဆိုပေမယ့် အစားတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ ကလေးကို လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ ချောကလက်ကို ဘယ်အချိန်ဆို စကျွေးလို့ ရမလဲဆိုတာကိုရော သိထားပြီးပြီလား မေမေဖေဖေတို့ရေ။
ဘေဘီလေး ချောကလက် စားလို့ ဖြစ်ရဲ့လား……
ချောကလက်က ဘေဘီလေးတိုင်း ကြိုက်မယ့်အရသာပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းငယ်သေးတဲ့ ဘေဘီလေးနဲ့တော့ ချောကလက်က အဆင်မပြေပါဘူး။ အသက် ၁ နှစ် မပြည့်ခင်အထိ ဘေဘီလေးကို ချောကလက် မကျွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီလိုပြောရတာက ချောကလက်မှာ ကဖင်းဓာတ် ပါနေတာကြောင့် ပါပဲ။ ကဖင်းက သွေးပေါင်ချိန် မြင့်စေနိုင်သလို နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း မြန်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ချောကလက်မှာပါတဲ့ အချိုဓာတ်က ဘေဘီလေးရဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ချောကလက်မှာပါတဲ့ anandamide က ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ချောကလက် ဘယ်လို မိတ်ဆက်ပေးမလဲ………..
ကလေးကို ချောကလက် ဘယ်လိုကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း သီးသီးသန့်သန့် မရှိပါဘူး။ ကလေး တစ်နှစ်လောက် ရောက်ပြီဆိုရင် ချောကလက်ကို နည်းနည်းချင်း စကျွေးလို့ ရပါတယ်။ သတိထားရမှာ တစ်ခုက ချောကလက်မှာပါတဲ့ အချို့အရာတွေက ဘေဘီလေးနဲ့ မတည့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလောက် စကျွေးတာက အဆင်အပြေဆုံးပါ။
ကလေးစားနေကျ အစားအစာတွေထဲမှာ ချောကလက်မှုန့် နည်းနည်းထည့်ပြီး စကျွေးကြည့်ပါ။ ကလေးကို စကျွေးစမှာ နည်းနည်းလောက် ကျွေးတာ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ချောကလက် ကျွေးတဲ့အခါ label ကို ဖတ်ပြီး သေချာလေး ရွေးချယ်ပေးပါ။
ဘေဘီလေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ချောကလက် ရွေးချယ်မယ်
ချောကလက်မှာပါတဲ့ အချို့သောအရာတွေက ဘေဘီလေးတွေနဲ့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးကို ချောကလက်ကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှု မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင် ဘေဘီလေးအတွက် ချောကလက်ရွေးချယ်တဲ့အခါ
ဂလူတန် ပါတာမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးက ချောကလက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တာလား……………
မိဘတွေမှာ ချောကလက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တာမျိုးဖြစ်ဖူးမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးမှာ ချောကလက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘေဘီလေးက ချောကလက် စားပြီးချိန်မှာ
အနီရောင် အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်မယ်
အသက်ရှူတာ တရွှီရွှီ ဖြစ်မယ်
လျှာတွေ၊ လည်ချောင်းတွေ ရောင်မယ်
အန်မယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးက ချောကလက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တာပါ။
ဘေဘီလေးကို ချောကလက် ကျွေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေသတိထားစေချင်ပါတယ်
ဘေဘီလေးမှာ ချောကလက်ကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုအပြင် ဒါလေးတွေပါ ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ချောကလက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။
အစာမကြေတာ – ဘေဘီလေးတွေက ၆ လအထိ မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းကို သောက်လာတာပါ။ သူတို့ရဲ့ အစာခြေစနစ်က အစာမာတွေ နဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ချေဖျက်ဖို့ ခက်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် ချောကလက် အပါအဝင် အစာမာ အချို့ကို ဘေဘီလေး တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ဘေဘီလေးကို စကျွေးပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစာတွေကို မိတ်ဆက်ဖို့ ခက်သွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် – ကလေးက ချောကလက်ကိုပဲ သဘောကျပြီး အခြား ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားတွေကို မစားတော့ဘဲ ချောကလက်ကိုပဲ အာသာပြင်းပြင်းစားမှာ စိုးရပါတယ်။
သွားပိုးစား နိုင်ပါတယ် – ချောကလက်မှာ သကြားပါဝင်နေတာကြောင့် အများကြီးစားမိမယ်ဆိုရင် ကလေး သွားပိုးစားတာ၊ သွားထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစာနင်နိုင်တယ် – ချောကလက်မှာ အခွံမာသီးတွေ နဲ့ အခြားသော အရာတွေ ပါဝင်နေတတ်တာကြောင့် အခန့်မသင့်ရင် ကလေးမှာ အစာနင်တာမျိုး ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။
Is Chocolate Safe for Babies? https://parenting.firstcry.com/articles/is-chocolate-safe-for-babies/ Accessed Date 19 May 2020
Can Babies Have Chocolate? https://www.healthline.com/health/parenting/can-babies-have-chocolate Accessed Date 19 May 2020
When Can You Give Your Baby Chocolate? https://www.verywellfamily.com/when-can-i-give-my-baby-chocolate-290365 Accessed Date 19 May 2020